Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မိသားစုဘဝ
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဂျာမန်ဘောလုံးကစားသမားများ Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB "အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်နှင့်အတူလူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်ရှင်းလင်းသူများ". ကျွန်ုပ်တို့၏ Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံ, ကျော်ကြားမှုမတိုင်မီဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝင်ပတ်သက်, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝစသည်တို့မှထမြောက်
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုအားလုံးရာထူးအတွက်ကာကွယ်ရေးကစားရန်မိမိအစွမ်းရည်အကြောင်းကိုသိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Thilo Kehrer ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုမြစ်များ
Thilo Kehrer Tubingen, ဂျာမနီအတွက်စက်တင်ဘာလ 21 ၏ 1996st နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူကအာဖရိကမှာသူတို့ဘဝတစ်အသီးအနှံများတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသုံးစွဲသူတစ်ဦးဂျာမန်ဖခင်နှင့်တစ်ဦး Burundian မိခင်တစ်ဦးတစ်ဝက်-ဇာတ်မွေးဖွားခဲ့သည်။
Thilo Kehrer သည်သူ၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့အစ်မစာရာ (ထွ-Boyfriend ၏နဲ့အတူကြီးပြင်း Serge Gnabry) ဘူရွန်ဒီထို့နောက်ရဝမ်ဒါအတွက်ပထမဦးဆုံးအာဖရိကအတွက်။ သူ့အမိကားသူမခင်ပွန်းဖခင်နှင့်အတူဘူရွန်ဒီနှင့်သူမအနေဖြင့်မူလကဖြစ်သော်လည်းအဆိုပါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်လက်ထပ်မတိုင်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤအပြင်သစ်နိုင်ငံများ၌ကြီးပြင်းသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုပြင်သစ်ဘာသာစကားမှာကျွမ်းကျင်စွာဖြစ်နိုင်စွမ်းကိုပေး၏။
Thilo, Tübingenတစ်ဇာတိ "သူ၏အမည်သစ်ကိုရသောရှိပါတယ်Kehrer"များသောအားဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်, Bavaria နှင့် Saxony ၏တောင်ထူထပ်သောဒေသများတွင်နေထိုင်သောသူဇာတိအားဖြင့်ဘွားရှားပါးဂျာမန်အမည်အားဖြစ်။ အဆိုပါအမည် "ကိုဆိုလိုတာပုံတစ်လမ်းထဲမှာကွေးနေဖြင့်နေထိုင်နေသူတစ်ဦးဦး"။ ခေတ်သစ်ဂျာမန်မှာတော့နာမကို Kehrer "ကိုဆိုလိုသည်သန့်ရှင်းရေး"။
Thilo Kehrer ၏မိဘများသည်သူတို့၏မိခင်မိသားစုကိုအမြစ်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရစေနိုင်ရန်အတွက်အရှေ့အာဖရိကမှာသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ မိသားစုသစ်ကို Melinnium (တစ်နှစ်တာ 2000) ၏ခေါက်မတိုင်မီTübingen, ဂျာမနီမှပြန်လာသောအဖြစ်သို့သော်သူတို့၏နေထိုင်တိုတိုနထေိုငျခဲ့သညျ။
Thilo Kehrer Hometown- Pfäffingen။
သူတို့ရဲ့ပြန်လာပေါ်၌ Thilo Kehrer ရဲ့မိသားစုPfäffingen, Ammerbuch မြို့တော်စည်ပင်က, Tübingen၏အနောက်ဘက်တစ်ခရိုင်မှာနထေို။ အဲဒီမှာနေထိုင်နေပေမယ့်သူကယှဉ်ပြိုင်အားကစားကစားနှင့်သူ၏ပထမဦးဆုံးအားကစားအောင်မြင်မှုရတယ်ရှိရာမြို့ရဲ့မူလတန်းကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။
"မိမိအမူလတန်းကျောင်းပညာရေးရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်း Thilo သူပိုရောက်ခုန်ခြင်းနှင့်အမြန်ဆုံးပြေးနိုင်သူမှသာဆိတ်သငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အလျင်မြန်ဆုံးယူဆခဲ့သည်"။ ဤအချက်အလက်သည်အဘယ်သူ၏သား Thilo အားဖြင့်ထိုအတူကျောင်းသို့ သွား. အဘယ်သူသည်အကြောင်းကို 300 မီတာကွာPfäffingenအတွက်သူ့ရဲ့ကလေးဘဝနေအိမ်ထဲကနေနေထိုင်ခဲ့ Armin Göhringအားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Tagblatt အစီရင်ခံစာ။
ကံကောင်းတာက, Armin Thilo ရဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းမှာဘောလုံးပြိုင်ပွဲဦးစီးဌာနခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကပဲလူကလေးကိုတန်ဖိုးထားခြင်းထက် သာ. ပြု၏။ သူကအရာကသူ့တစ်ခုတည်းကိုသာဘောလုံးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအပေါ် Thilo အကြံပြု ကျောင်းကသူ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲဘောလုံးပုံမှန်ဝါသနာဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားဖြစ်လာရန်မိမိအဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒေသခံတစ်ဦးကလပ်မှာစာရင်းသွင်းသူ့ကိုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
အသစ်ကထောင်စုနှစ်ရဲ့ခေါက်မှာ Thilo Kehrer ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရုံစတင်ခဲ့သည်။ ဘောလုံးသည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုကသူ့ကိုသူသညျမိမိသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှလေ့ကျင့်ရေးခဲ့ရှိရာမိမိအဒေသခံလူငယ်ကလပ်, TSG Tübingen၏တန်းစီဇယားသို့မအပ်နှံကိုမြင်တော်မူ၏။
TSG Tübingenမှာ Thilo Kehrer အစောပိုင်းနှစ်များ။ ခရက်ဒစ်မှ DFB
ညာဘက်စတင်ခြင်းကနေ Kehrer သဘာဝကျကျ Two-ခြေဖြစ်ဖို့လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူဟာအလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လက်ဝဲနှင့်လက်ျာခြေမနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများရှိနေသော်လည်းကလပ်မှာ Kehrer ရဲ့ကောင်းသောစတင်များကြောင့်စိုးရိမ်ကလပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတယ်တဲ့ကိစ္စကိုမှ shortlived ခဲ့သည်။ ဒါကသူတို့ကသူသည်ထင်ရှားနှင့်သူ၏အသင်းဖော်၏ကျန်မတူပဲအရမ်းကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပြုမူသည်ဟုစောဒကတက်နေတဲ့အချိန်ပဲ။
"KEHRER'S ROUTE မွဲဖြောင့်-FORWARD မဟုတ်ခဲ့"
ကလပ်ရဲ့ဘောလုံးအခြေစိုက်စခန်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Wolfgang ကို Poerschke ဟု Kehrer ရဲ့ upkeep တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကဆက်ပြီး ...
"ခဏတစ်ဖြုတ်အဘို့, သူလည်းပေါ့ပေါ့ကြီးနှင့်သူ့ကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းမနည်းပြရသည်။ သူကတစ်ဦးပြောင်းလဲသဘောထားကိုနှင့်အတူပြန်ပေးသောပြီးနောက်, ကျေးဇူးတင်စရာ, Thilo signal ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အလွန်အပြုသဘောတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ "
သူဒေသခံတစ်ဦးနည်းပြ, အဲလ်ဘတ် rocker များကကူညီခဲ့သည်ပြီးနောက်တစ်နှစ် 10 အတွက် 2006 ၏အသက်အရွယ်မှာ Thilo Kehrer SSV Reutlingen နောက်ထပ်ဘောလုံးအကယ်ဒမီသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူ့မိသားစုဧရိယာမှပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်ဒီအပြောင်းအရွေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ Kehrer အလျင်အမြန်ကလပ်မှာရာထူးတဆင့်မြင့်တက်လာသည်။ သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအခိုက်သူအခွက်တဆယ်ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရသည်သူ၏လူငယ်ကလပ်ဦးဆောင်သည့်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှလမ်း
သူသည်တစ်နှစ် 2009 အတွက် VfB စတုဂတ်မှပြောင်းရွှေ့တယ်လာသောအခါ Kehrer ရဲ့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကာကွယ်ရေးကျောက်မျက်ပြင်းထန်သော maturit နှင့်အတူ coupled ကလပ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခုန်ခဲ့ရတယ်။ ဒါကသူ့ကိုအင်တာဗျူး၌သူ၏အသင်းဖော်ကိုယ်စားပြုရွေးချယ်ခံရရွေးချယ်မှုအတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်ခဲ့ပါသည်။
ခရက်ဒစ်မှ EnBW-Oberliga Junioren.
လူငယ် Captiancy မှထ:
VfB စတုဂတ်မှာနှစ်ခုအောင်မြင်သောနှစ်ကြာပြီးနောက် Kehrer ၏အောင်မြင်မှုသည်ကိုယ်တော်တိုင်မန်ယူ 04 လူငယ်စနစ်, လူငယ်ခွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၎င်း၏ pedigree လူသိများဂျာမန်ကလပ်ကဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်းကိုမြင်တော်မူ၏။
မိမိအအစောပိုင်းမန်ယူရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းငယ်ရွယ် Kehrer သူသည်ယနေ့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဘောလုံးသမားသို့ကိုယျတျောကိုပုံသွင်းဘို့တာဝန်ရှိခဲ့သူဒဏ္ဍာရီလူငယ်နည်းပြ Norbert Elgert တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Norbert Elgert- မန်ယူ Talents နောက်ကွယ်ကလူက။ Photo: AFP မှအကြွေး
အထက်ပါဓါတ်ပုံတစ်ပုံမှလေ့လာတွေ့ရှိထားသကဲ့သို့, Norbert Elgert ရုံ Kehrer ပုံသှငျးခဲ့ပါဘူး။ သူကအခြားကြီးမားသောကြယ်များအထူးအကြိုက်၏ကြီးပြင်းခဲ့သူတယောက်တစျခုဖွစျသညျ Leroy စိတ်ကောင်းသော, အိုဇေး, Manuel Neur နှင့် ဂျူလီယန် Draxler ။
Kehrer သည်သူ၏လူငယ်ကစားသမားဘ၏ကျန်ရှိသောနှစ်ပေါင်းမန်ယူမှာတည်းခို အဆိုပါမန်ယူ 04 II ကိုစနစ်ကတဆင့်အေးချမ်းတိုးတက်မှုအောင်။ သူသည်မန်ယူ 04 U19 Junior အသင်းခေါင်းဆောင်တဲ့အခါမှာသူ့လူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Springboard နဲ့တူကစားသမားနှင့်အတူ (သို့ရောက်လာသော Leroy စိတ်ကောင်းသော) ကချန်ပီယံခေါင်းစဉ်နှင့် Westfalen ဖလားအနိုင်ရသို့။
Thilo Kehrer အသင်းဖော်တွေနဲ့ Westfalen ဖလားအောင်ပွဲကျင်းပ။ တွစ်တာမှ credit ။
သူ၏ခိုင်ခံ့သောဖျော်ဖြေပွဲနှင့်အတူသူသည်ကလပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုယုံကြည်သူသည်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ပေးဖို့ခွင့်ရခဲ့သည် မန်ယူ အကြီးတန်းအဖွဲ့။
Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှထလော့
Thilo Kehrer ကသူ၏မန်ယူပွဲဦးထွက်ဘို့ခဏစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ သည်းခံခြင်းနှင့်ပြဌာန်းခွင့်သည်ဤကာလအတွင်းကသူ့ watchwords ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့ရောက်လာသောနောက်ဆုံးတော့သူကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏ရှားပါးမှုကြောင့်အကြီးတန်းကစားသမားအတွက်ခွင့်ပြုခဲ့ကွောငျးပထမဦးဆုံးအဖွဲ့ကအခွင့်အလမ်း။ Nastasic နှင့်Höwedesကိုမရရှိနိုင်ခဲ့ Kehrer သည့်ဘွန်ဒစ်လီဂါ၌သူ၏ပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။
Khrer ကသူ၏ကာကွယ်ရေးနှင့်ပင်အကြီးမားဆုံးဂျာမန်ဒါဘီတိုက်ပွဲဖြစ် (ဒေါ့မွန် vs FC အသင်းမန်ယူ 04) တွင်သောမတ်စ် Tuchel ရဲ့ဒေါ့မွန်အသင်းကိုဆန့်ကျင်သည်သူ၏ပွဲဦးထွက်ဂိုးအတွက်ရက်စက်ခဲ့ပါတယ်။
FC အသင်းမန်ယူ 04 မှာကျော်ကြားမှုမှ Thilo Kehrer ရဲ့ rsie ။ Comunio ဘလော့နှင့် Zimbio မှအကြွေး
နေအိမ်မြေပေါ်တွင်ခါးသီးပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်သွင်းယူ Kehrer ပရိတ်သတ်တွေ '' ချစ်ခင်ရရှိခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်လည်း၏မျက်စိ၌မိမိပရိုဖိုင်းကိုမြှင့်မသာ သောမတ်စ် Tuchel (အရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်လက်ရှိ PSG အသင်းသူဌေးက) ။ Kehrer ရုံရှိရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ သူလည်းတစ်ဦးကပ္ပတိန်အဖြစ် 21 အတွက် U-2017 ယူရိုအနိုင်ရသွားလေ၏။
အသင်းဖော်တွေနဲ့ U-21 ယူရို 2017 အောင်ပွဲခံကျင်းပ Thilo Kehrer ။ တွစ်တာမှ credit ။
ဤအချက်မှာ, သူသတင်းများအရထိပ်တန်းဥရောပကလပ်များ၏အရေအတွက်အားဖြင့်စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ သူတွေထဲမှာ PSG အသင်းကစီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်ခဲ့သည် သောမတ်စ် Tuchel အဘယ်သူကို Kehrer သူ့ယခင်အသင်းအရှက်။ Tuchel Thilo Kehrer, သူ့ကို 37 ယူရိုသန်းဖြုန်းပြီးဘွန်ဒစ်လီဂါစံချိန်လွှဲပြောင်းကိုချိုးဖောက်မြင်သောတစ်ဦးလွှဲပြောင်းရဖို့သူတတျနိုငျသအားလုံးကိုပြု၏။
PSG အသင်းများအတွက် Thilo Kehrer လက္ခဏာတွေ။ ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းမှအကြွေး
Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- relationship ဘဝ
Thilo Kehrer ရဲ့ Girlfriend ကားအဘယ်သူနည်း Instagram ကိုမှအကြွေး။
တိုင်းအောင်မြင်သောဘောလုံးသမားနောက်ကွယ်တွင်တစ်ဦးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဖျားခါအမှန်ပင်ရှိပါတယ်။ သို့သော် ဖြစ်နိုင်သည် Thilo Kehrer ၏ဝှက်ထားသောအချစ်သီချင်းသူ့မေတ္တာဘဝပုဂ္ဂလိကနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဒရာမာ-အခမဲ့ကြောင့်ရိုးရှင်းစွာအများပြည်သူမျက်စိများ၏စိစစ်လှရာတစျခုဖွစျသညျ။
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်, Kehrer ကသူ၏ပုဂ္ဂလိကဘဝအပေါ်မည်သည့်မီးမောင်းထိုးရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ သူကတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်ထိုသို့အများပြည်သူစေခြင်းငှါမကြိုက်နှစ်သက်သည်နိုင်ဘူး။
Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Thilo Kehrer ကိုယ်ပိုင်ဘဝက။ Instagram ကိုမှအကြွေး
ယင်းအစေးကိုချွတ် Kehrer ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုသိရန်ရယူခြင်းသငျသညျအထံတော်၌ပြည့်စုံရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ချွတ်စတင်ကာ Kehrer အလွန်နှိမ့်ချညျမွကွေီးပျေါမှယနေ့တိုင်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သူကသူ့အမြစ်များကိုသိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အသက်တာကိုမှသူ့နည်းချဉ်းကပ်ဘာမျှအခွင့်အလမ်းမှထွက်ခွာကြောင်းသေချာ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသည်သူ၏မရေမတွက်အချက်အလက်များတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင် Thilo Kehrer တစ်ဦးနူးညံ့သောနှလုံးနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏နက်ရှိုင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။
ဘူရွန်ဒီနှင့်ရဝမ်ဒါရှိသူ၏အစောပိုင်းဘဝအသကျရှငျနေသော်လည်း Thilo Kehrer Pfäffingen, ဂျာမနီအတွက်သုံးစွဲသူ၏ကလေးဘဝအသက်တာကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအခိုက် adores ။
Thilo Kehrer မွေးရပ်မြေ။ ခရက်ဒစ်မှ ရပ်ရွာ Ammerbuch
အဆိုပါပါ၏အပေါ်အမြဲ paparazzi နှင့်အတူ, Kehrer ရဲ့မိသားစုအထူးသဖြင့်သူ့မိဘလက်ရှိ web ပေါ်မှာကွာ၎င်းတို့၏ဓါတ်ပုံများ၏အဘယ်သူမျှမခြေရာတွေနှင့်အတူအများပြည်သူမျက်စိကနေသူတို့ဘဝစောင့်ရှောက်လော့။ သို့သော်ဤ Kehrer ရဲ့လှပသောအစ်မစာရာများအတွက်စစ်မှန်သောမဟုတ်ပါဘူး။
Thilo Kehrer မိသားစုအကြောင်းကိုဆုံးသောစိတ်ဝင်စားဖို့အဖြစ်မှန်:
စကားလုံး "WAGs"အရာ high- ၏ဇနီးနှင့်မိန်းကလေးဆိုလိုတယ်ပရိုဖိုင်းကိုဘောလုံးသမားများမကြာသေးမီကာလ၌အလေးချိန်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ သူမ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အလှဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်စာရာ Kehrer "ဟုအဆိုပါစကားလုံးအောင်စတင်ခဲ့သည်၏နှမများ"အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့။
Thilo Kehrer မိသားစုဘဝ: သူ၏ညီအစ်မ။ ခရက်ဒစ်မှ Insta Stalker
စာရာသည် Kehrer ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရေကူးဝတ်စုံနဲ့သူမရဲ့ပြီးပြည့်စုံစုဆောင်းခြင်းမှ Instagram ကိုကျေးဇူးတင်စကားအပေါ်တစ်ဦး Hugh ပန်ကာအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဂျာမန်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်၏မြို့တော်မှသူမ၏လည်ပတ်မှုများထဲမှစဉ်အတွင်းသူမမြို့ကိုတကြိမ်စကားပုံမှသူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြေငြာ: "ပဲရစ်, သင်တို့ကိုငါခစျြ"။
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်တစ်ဦး၏အဘယ်သူမျှမခြေရာတွေရှိတယ် "အချစ်"သူမ၏ Instagram ကိုအကောင့်ပေါ်မှာ။ ယခင်ကဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းစာရာ Kehrer သူမ၏အစ်ကိုမှဂျာမန်ဘောလုံးသမားနှင့်မိတ်ဆွေတဦးနဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်ချိန်ကခဲ့ Serge Gnabry အဘယ်သူသည်ဂျာမန်နှင့်အိုင်ဗရီကို့စ်ဇာစ်မြစ်နှစ်ခုလုံးရှိပါတယ်။
2018 မှာတော့စာရာသူမ၏ဆက်ဆံရေးဟာအဆုံးသတ်နှင့်ဟုစာနယ်ဇင်းများတွင် Gnabry နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဟာတရားဝငျမှတျပုံတငျ; "ကျနော်တို့ငါတို့စပ်ကြားအလုံအလောက် connection ကိုမျှမသဘောပေါက်။ "ထိုခဏခြင်းတွင်ထိုနောက်မှသူ့ Instagram ကိုအပေါ်သူ့ကိုအပေါငျးတို့သဓါတ်ပုံဖယ်ရှားခဲ့သည်။
Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- လူနေမှုပုံစံ
Thilo Kehrer တော်တော်လေးအထင်ကြီးကားများ, ကြီးသောအိမ်, အရက်များခြင်း, swagger နဲ့လှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးလက်တဆုပ်စာအားဖြင့်အလွယ်တကူသိသာသည့်ခမ်းနားထည်ဝါစွာလူနေမှုပုံစံစတဲ့နထေိုငျသောဘောလုံးသမားအမျိုးအစားမဟုတ်ပါဘူး။
သူ့ကိုနီးပါးဘာမှမတတ်နိုင်ရန်အဘို့အ 35,00 သန်းယူရိုတစ်ဦးကလက်ရှိစျေးကွက်တန်ဖိုးနှင့် PSG အသင်းမှာကြီးမားအပတ်စဉ်လုပ်အားခနှင့်အတူကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဇကျော်ကြားမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းသူဘောလုံးကိုကိုင်တွယ်လမ်းကိုရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုတိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်။ Kehrer ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်စျေးကြီးအားလပ်ရက်များအတွက်အချိန်မရှိပါ။ အပန်းဖြေ၏သူ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်ထင်ဟပ်အဖြစ်သူတစ်ဦးအလွန်ရိုးရှင်းသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့နေထိုင်ပါတယ်။
Thilo Kehrer လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်နဲ့။ တွစ်တာမှအကြွေး
Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မရေမတွက်အချက်အလက်
Thilo Kehrer UnitedCharity မှ Africa- ချေးငွေအတွက်အမြိုးသားမျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။
Thilo Kehrer ၎င်းတို့၏အာဖရိကဇာတိမြေပြန်သောသူအလွန်နည်းပါးအာဖရိက-ဥရောပဘောလုံးသမားများအကြားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂျာမန်ဘောလုံးကြယ်ပွင့်ကိုသူကငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းက "ကိုထောကျပံ့ပေးစွမ်းသည်ဘယ်မှာမိမိအဘူရွန်ဒီတွင်ကောင်းသောအမှုကိုအကြောင်းမရှိမှကျူးလွန်နေသည်မြျှောလငျ့ဖို့ Kickoff"။ Kehrer ရဲ့ထောက်ခံမှုမှတဆင့်, သူ့မိခင်ရဲ့ဇာတိမြေအားလုံးကိုလူမှုရေးအရချို့တဲ့လူများဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပစ္စည်းအကူအညီများ Kehrer ပေးသည်မှတဆင့်မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုရှာပါ။
သူပြီးတာနဲ့တစ်ရောင်ရမ်းမျက်လုံးနှင့်အတူ 90 မိနစ်:
Thilo Kehrer မရေမတွက်အချက်အလက်နဲ့တစ်ချိန်ကရောင်ရမ်းမျက်စိနှင့်အတူကစားခဲ့ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်မှ Schalke04
သူ Mainz ဆန့်ကျင် 90 ခဲယမ်းကစားအဖြစ်သူ၏မန်ယူရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းရော်ဘင် Quaison နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ် မှစ. Thilo Kehrer ပြာထူမျက်စိဝတ်ဆင်။ အဆိုပါဒဏ်ရာ header ကို duels အောင်တို့မှအနေဖြင့်နောက်ခံလူတားဆီးခဲ့ပါဘူး။
Thilo Kehrer ရဲ့စာချုပ်ဟာစည်းလုံးညီညွတ်မှုအလှူငွေရှိပါတယ်။ ဖီဖာစည်းမျဉ်းများအရ, ဒီတဲ့အခါမှာအခြားတိုင်းပြည်များတွင်ကလပ်တစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားလွှဲပြောင်း activated သော 5% ကြေးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအ 37 ယူရိုသန်းလွှဲပြောင်း PSG အသင်းကသူ့သင်တန်းနှင့်ဘောလုံးပညာရေးမှလှူဒါန်းခဲ့သောသူအပေါင်းတို့သည်ဂျာမန်ကလပ်တစ်ခုစည်းလုံးညီညွတ်မှုအလှူငွေပေးဆောင်ကိုမြင်တော်မူ၏။
Thilo Kehrer သည်သူ၏အများဆုံးလေးစားဖွယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ Sergio Ramos နှင့် Thiago Silva ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကိုတက်ကြီးထွားလာနေချိန်တွင်သူကအများကြီးစောင့်ကြည့်ဘောလုံးသမားများရှိကြ၏။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
ယောလ Matip ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Serge Gnabry ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
လီယွန် Goretzka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Sead Kolasinac ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Niklas ဆူးလေကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Shkodran Mustafi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Sami အဘိဓါန် Khedira ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
H.Geissbauer6တွင်ဇန်နဝါရီလ 2020၊ 6: 40 ည
Die Hilfsorganisation, ဘူရွန်ဒီရှိ Thilo သေunterstützt heisst“ Anstoss zur Hoffnung eV” ဘူရွန်ဒီတွင် CEPEB (“ အာဏာသိမ်းမှုဘူရွန်ဒီသည်အာဏာသိမ်းမှု”) ဖြစ်သည်။
Manuel Neuer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Ilkay Gundogan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်